Xanafi..Ma La Dilay Mise Waa La Daayay? W/Q Eng Khaliif Muumin – Calamada.com
Xanafi..Ma La Dilay Mise Waa La Daayay? W/Q Eng Khaliif Muumin
calamada April 13, 2016 7 min read
Xasan Xanafi, wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo koox dawlado ah iyo qowleysato isugu tageen, ka dibna aan mowqifkiisi waxna ka badalin, nin la jirdilay oo la isku dayay inuu ku aaqirsado “Dhimmo oo Ceeb Reeb” balse cirdigiisa difaacday oo fadeexeeyay cadowgiisa, isagoo oranaya waxaan dhimanayaa anigoo Sharaf leh iyo adinkoo Daacuf leh.
Isniintii tagtay, ayay isoo gaartay in ugu danbeyn la dilay Xasan Xanafi, ka dib markii lagu maxkamadeeyay qiraal jirdil ah, lagu soo marqaatiyay codad been ah, hadane lagu riday xukun cadaalad darro ah, ugu danbeyntiina lagu fuliyay dil waafqasan “Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeedâ€.
4 sanadood ka hor, markii la khaarijiyay rag wariyeyaal u ahaa maamulka AMISOM ayay shuftooyinka qaar oo saaxiib la aha raggaas waxey Music murugo leh u cayaareen ragga dhintay iyagoo cadaalad xumadooda hal nin kaliya oo ka mid ahaa raggaas ku sheegaya “Shahiidâ€, inta kalena kolley tolkooda ayay ka baxeen.
Balse, waqtigaas qormo ayaan kaga sheekeeyay arrinkaas oo cinwaan uga dhigay [ Liibaan Cali Nuur ma shahiiday?] suâ€™aashaas jawaabteeda waan helay, dadkii aqriyay maqaalkeygana dhamaan way igu waafaqeen sida aan ka qiyaasay warcelino ay ii soo direen.
Halkaan ka aqriso Maqaalka: Liibaan Cali Nuur Ma Shahiiday?
Hadda, waxaan isku dayi doonaa in qormadan aan uga jawaabo suâ€™aasha aan cinwaanka u doortay ee ah: [ Xanafi..ma la dilay mise waa la daayay?] waayoo markiiba aan maqlay dilkiisa ayaan is weydiiyay suâ€™aashaas, waxaana gad-gadin badan ka dib aan helay jawaabta, sidaa darteed qormadan waxaan ku soo bandhigayaa gad-gadintii aan sameeyay, si qof waliba oo aqrisanaya ay ugu soo baxdo jawaabtii ii soo baxday.
2-dii bishii August, 2014 ayuu Xasan Xanafi waayay xoriyaddiisii ka dib markii ay sirdoonka Kenya kala baxeen guri uu ka deganaa gudaha magaalada Nairobi, xabsiga ayay u taxaabeen iyagoo ka dibna heybtiisa baaray oo ugu danbeyn ka warhelay inuu yahay shaqsiyad caan ah oo ka tirsanaa Xarakada Al-Shabaab.
Maalinkaas ayuu Xasan galay nolol taxaddi iyo ishaafalato ku dhisan; isagoo nool ayaa la beecsaday oo Nairobi ay ka soo gateen maamulka Gurguurte, ka dibna waxey sheegteen iney iyagu soo qabsadeen, iyagoo furay kiiska dilal koox wariyeyaal ah oo Xasan loo heystay.
Maadaama arrinku tuhun dhaafsaneyn, Filim sida kuwii Hindiga ah ayay noo soo jileen, ka dibna ay caddeymo ku sheegeen, ugu danbeyntiina ku xukumeen Xasan Xanafi.
Balse kama hadlayyo qaabkii Filinkaas “Hindigaâ€ loo jilay iyo fadeexaddii ka qabsatay shuftada, balse waxaan ka hadlayaa oo kaliya qaabkii uu u dhacay dilkii Xasan, sida uu ahaa xaalka markii la tooganayay iyo argagaxii heleelay shuftadii u soo daawasho tagtay fagaarihii Jariimada.
Dilka ka hor
Sida igu maqaala ah, Xasan iyo ehelladiisuba habeen ka hor ayay ogaayeen in dilku dhacayo Isniintii, nasiib wanaag ayay aheyd in Xasan, isagoo ku dayanaya Sunnadii Nabigeena Muxammad ØµÙ„Ù‰ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ ÙˆØ³Ù„Ù… uu soonnaa Isniinta â€“Sunno ahaan- balse maadaama ay ku beegneyd maalinkii la dilayay, wuxuu ALLAH la kulmay isagoo Saaâ€™im ah.
Kuma buun buuninayo cibaadadiisa, waa wax ka dhexeeya isaga iyo rabbigiiisa, balse cadaawaddii loo hayyay awgeed, waxaan is leeyahay ma jeclaan laheyn cadowgiisa iney fursaddaas siiyaan Xasan oo ay dilaan isagoo sooman, manaba ku sii jirto toogashada Xasan oo marar badan baaqaneysay.
Markii laga soo bixiyay Xabsiga ayuu takbiirsaday, wuxuuna soo macsalaameeyay koox maxaabiis ah oo sidiisa oo kale dhibaato ku jirtay, wuxuu ku yiri “Maanta ayaan xornimadeydii dib u helayyaaâ€, askartii wadday waxey moodeen qof waalan balse badanaa dadka yaqiintoodu fogaato wayba isaga ekaadaan wax waalan oo kale.
Khubeyb Inbu Cadiy iyo Xasan Xanafi
Ku dhawaad 15 qarni ka hor, nin dhalinyaro ah (Khubeyb Ibnu Cadiy ) oo raacsanaa Nabi Muxammad ØµÙ„Ù‰ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ ÙˆØ³Ù„Ù… ayaa shufto maamuleysay magaalada Makka waxey ka soo iibsadeen koox qowleysato ah oo soo qafaalatay (Reer Banu Lixyaan), waxaana isugu tagay qab-qablayaal kala duwan oo jirdil xoog leh kula kacay iyagoo u heysta danbi ah: inuu la jihaadayay oo rag-na uu ka dilay, isla markaana uu doonayay diintii Nabi Muxammad ØµÙ„Ù‰ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ ÙˆØ³Ù„Ù… iney sare noqoto.
Sida uu sheegayo Imaam Bukhaari, Khubeyb ayaa ugu danbeyn la keenay fagaare ku yaalla magaalada Makka si loogu fuliyo xukun dil ah, balse mowqifkii adkeysiga ee uu muujiyay ayaa taariikhda galay, wuxuuna tukaday laba rakcadood, isagoo ku cel-celinaya gabay micnihiisu yahay si kooban:
Mar-ba haddii la i dilayo anigoo Muslim ah, waxba uma arko qaab kasta ee aan u dhimanayo!
Khubeyb, sidaas ayaa lagu dilay, wuxuuna u jideeyay qof waliba ee Muslim ah oo xaalkiisa oo kale qabsado inuu laba rakcadood tukado, geeridana ka baqin.
Maantana, ku dhawaad 15 qarni ka dib, nin dhalinyaro ah (Xasan Xanafi) oo raacsan Nabi Muxamadd ØµÙ„Ù‰ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ ÙˆØ³Ù„Ù… ayaa shufto maamuleysa magaalada Muqdisho waxey ka soo iibsadeen koox qowleysato ah oo soo qafaalatay (Sirdoonka Kenya), waxaana isugu tagay qab-qablayaal kala duwan oo jirdil xoog leh kula kacay, waxeyna ku heysteen danbi ah: inuu la jihaadayay oo rag-na uu ka dilay, isla markaana uu doonayay diintii Nabi Muxammad ØµÙ„Ù‰ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ ÙˆØ³Ù„Ù… iney sare noqoto.
Sida taariikhdu marqaatiga ka tahay, (Xasan Xanafi) marna kama laaban diinkiisii, waxaana uu u adkeystay sida Khubeyb oo kale maadaama ay wada aamisanaayeen hal diin, ayna wada raacsanaayeen hal Nabi.
Xasan ayaa sidaas oo kale 2 rakcadood tukaday, geeridana aan ka baqin, wuxuuna maray masiirkii la marsiiyay Saxaabiga Jaliilka ah Khubeyb Inbu Cadiy Ø±Ø¶ÙŠ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ø¹Ù†Ù‡ .
Haddaba, Shuftada Muqdisho iyo Shuftaddii reer Makka hambalyo ayaan isu leennahay, ALLAHA meel isugu wada geeyyo Qiyaamaha, Xasan Xanafi iyo Khabeyb Ibnu Cadiy, iyana hambalyo ayaan isu leennahay, Qiyaamahana Jannada ALLAHA isugu geeyo.
Sh Nuur Abkey iyo Xasan Xanafi
Shaqsiyyan, anigu ma garaneyn Sheekh Nuur Abkey, laakin waxaan sida dadka oo dhan la socdaa inuu ka tirsanaa shuftada maamulka Muqdisho, balse waxaan doonayaa inaan soo xigto mawaaqif kala duwan isaga iyo Xasan Xanafi.
Dad ay aad isugu dhawaayeen Xasan Xanafi ayaa ii sheegay in Abkey markii uu gacanta u galay kooxihi dilayay uu aad u calaacalay, wax dhib ma lahan taas, waa nin rag ah oo cadowgiisa u gacan galay.
Balse waxaan u socdaa markii Abkey la tooganayay ayuu ka sii daray, wuxuuna ku cel celinayay inuu aad u “nasiib daran yahayâ€ markii la weydiiyay sababtana wuxuu dhahay “waayoo ma aqaano waxan ku dhimanayo ee ley dilayoâ€!
Balse Xasan Xanafi, maalinkii la dilayay si taas ka duwan wuxuu caro-gelinayay cadowgiisii, waxaa uu tukaday laba rakcadood ka hor toogashada, waxana cod la soo dhigay Internet-ka uu ku sheegay inuusan ka baqeyn geerida oo maalinkaas uu xaqiijinayay wixii uu qoriga u qaatay!
Kaas ma ahan farqiga labada nin ee Xasan iyo Abkey; labaduba waa baniiâ€™aadmi way kala dhiifoonaan karaan, balse farqigu waa dhinacyada ay kala matalaan, nin ku qanacsan waxa uu ka shaqeynayo inuu ALLAH kula kulmo iyo nin ka naxsan waxa uu ku jiro inuu ALLAH kula kulmo.
Rabbiyow, AMISOM iyo Ethiopia, Mareykanka iyo Midowga Yurub meel ha nasoo wada istaajin Qiyaamaha.
Ka dib dilka
Markii rasaastii koowaadba lagu asqeeyay Xasan, dhamaan kooxihi u ololeynayay dilkiisa afkii ayaa juuqda gabay, waa sax, nimanku dhiig uma baran oo dhaadhaca sharuurka ayay ku soo naaxeen, laakin hadane waa sax danbigu ma macaana, gabagabadiisuna waa qaraar, xittaa haddi ay afka ka inkiraan waxey dareensan yihiin iney Jariimo galeen.
Waxaa igu maqaala ah, markii xabadaha lagu hubsaday Xasan, in dhamaan ay qarracmeen; qaar baa is lahaa tolow “dilaaguâ€ siduu u dhiman doonaa? Kuwo kale ayaa ka naxsanaa: xabaduhu markey ku dhacayaan siduu noqon doonaa?
Xasanow, Halyeygii dadkiisow, cadowgaada wallee waad xakaartay.
Waxey ehelka Xasan ku yiraahdeen “dilka wiilkiinu waa Qisaasâ€? sababtoo ah waxey ogaayeen wax xeerkooda ah oo qabta inuusan jirin, laakin sow iyaduba xiiso ma lahan, qowleysatada ku shaqeysa maskaxda reer galbeedka ee muruqa Afrikaankana lagu ilaaliyo iney sidii Maamul Islaami ah xukun “Qisaasâ€ ah fulinayaan?!
Sidoo kale, Abwaanki luf-lufka iyo dhac-dhaca,oo goobta joogay ayaa is-la-ficiltamay oo u jawaabay dareenki isaga ka dhex guuxayay, wuxuu yiri “dadka canbaareyn doona falkaan waan ka digayaaâ€ balse miyuu wali la cayaarayaa calooshiisa?, marka uu jawaabta uu filanayo wali ay tahay “canbaareyn?
Meesha dhiig ayaa ku daatay oo takane (dakkane) ayaa yaallee, abwaanku ha barto isticmaalka hubka fudud, hurdadana yuusan badsan.
Ma ahan aniga waxa hadalkan dhahaya ee waxaan aqaanaa Al-Shabaab oo takanaha laga galo ay adag tahay iney hilmaamaan; balse hal meel kaliya ayaan is leeyahay qofkii gala way kaga haraan: waa Qabriga.
Koox dhalinyaro ah oo isku dareys ah ayaa markiiba u jiheystay “Tiirka Gowracaâ€ si ay usoo hubsadaan geerida Xasan, ka dibna maro cad ayay meydka ku soo riteen, iyagoo oranaya waan duugeynaa, kolley nimanka Shabaabka dadka laga dilo Shahiid ayay dhahaan, kumana tukadaan sida Diintu qabto, sidaas darteed Xasan loogama walwalin Janaazo laâ€™aan iney ku dhacdo, xittaa haddii kuwii dilay ay isaga ag foor-fooraarsadaan iyagoo dhahaya: waan ku tukunnay, waana u duceynay!
Laakin Xasan, markaas ayuuba xaqiijiyay xoriyaddiisii oo laga sii daayay gacanta shuftadii, magaciisii wuxu iska badalay maxbuus, muuqiisana wuxuu ka horwareegay inkaar qabayaashii uu muddo gacanta ugu jiray.
Xasanow, afqashuush danbe kuma soo hor istaagi doono, Xasanow Mooryaan danbe kuma jiid-jiidi doono, indhahaagu way arkeen wax badan, waxeyse markan arkeen -Bi Idnillaah- wixi ugu quruxda badnaa, waa Kheyrka loo ballanqaaday ruuxa Islaamnimada loo dilo.
Haddey soo daaraaan Video-gii ay kugu fadeexeyn rabeen waxaa loo daarayaa Video-gii aad sharafkaada ku difaacday iyagana aad ku fadeexeysay, haddii ay ku dileen adiga waxay dareemi doonaan in dilku aanu ku dhamaan dilkaaga, haddii ay noloshaada ka baqi jireen waxey baran doonaan iney geeridaada ka baqaan, Xasanow, cadowgaadu meel kuma nasanayo ee adiga -ALLAH idankiis- ku nassso daarihii dhaadheeraa ee Jannada.
Intaas danbe waa shucuurkeyga, waayoo waxaan arkay nin dhalinyaro ah oo cadow badan isugu tageen, dawlado ha dhihin, sirdoonno ha dhihin, qowleysato saxaafadeed ha dhihin, mooryaan ha dhihin iyo reera naareed kuwaan is leeyahay oo idil, markaas ayaan u hiiliyay.
Ugu danbeyn: hadda waan ka jawaabi karaa isweydiinta ah: Xasan ma la dilay mise waa la sii daayay, haa waa la dilay marka loo eego cadowgiisa, balse waa la sii daayay marka loo eego isaga Xasan ahaan iyo dhamaan dadkii jeclaa, waa la sii daayay oo xabsiga laguma sii celin, waa la sii daayay oo dib danbe looma maxkamadeyn doono, waa la sii daayay wuuna ku faraxsanaa, waa la sii daayay wuuna ka sii daayay adduunka!
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 06-07-1437 Hijri.
Next: Video+Sawirro:Linkiyo Cusub Filimka Al-Kata’ib Ee Dagaalkii Ceel-cadde.
2 thoughts on “Xanafi..Ma La Dilay Mise Waa La Daayay? W/Q Eng Khaliif Muumin”
abuu ahmed says:
akhi mumin wasax xasan walasidayey ooallah ayulakulmay waxana urajeynaya bidnillah shahid gisi ayuaha sharafta muslimintana wadifacay
Khaliifow abwaan kii tigree taabay halis tiiye
Tabadiyo unuun kaa u go,i tayska qadaf kiiye
Tacadiga u gays tana qisaas taam ahaa xigine
Tiiraanyo iyo ciil wax badan waa ku taag naane
Tolki waa amxaariyo wixii tacabud shaydaane
Talo xumo nin keed reeb tayoo taawo been noqoye
Tawxiidki ruuxuu buraan taajir noqonayne
Tacadigi u gays taa lamarin tiirna oo xirine
Taqsiin laha qubuuriga ahiyo kay tigree koroysay
Tolki nimu wahaabiyo yahiyo taysku masinayne
Tareesada ayaa gubi haduutuuqso yiri maale
Tabta niman aqoon iyo dagaal taladi waa hooge
Abwaan tuuga jaajuus tigreey tacabki waa hooge
Tiiraanyo iyo ciil wax badan way ku taag naane
Taaj iyo xariir xanafi saw taam u xiran maayo
Tobanaan ka badan xuurarciin waa mulkigi taama
Tubti Eebihiis ruuxi mara taajir waa noqone
Tolki nimu islaam yahay rabaan seejin taladiise
Tuugada iskaalmay satiyo taliski shaydaanka
Tiih iyo waxaan hoog ahayn taaban mahayaane
Mooryaan tigree qoratay iyo tuugi ina guure
Rabi taladi seejiyo riday talam sanaayaane
Xasana taaj shihiid loofilaatoobki loo xiraye
Turunturo ayey ulamid tahaytoogashadu xanafi